Ụgbọ mmiri kasị ukwuu n'ụwa | Njem akụkọ
ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa
Ha na-ekwu na ruo oge ụfọdụ ugbu a na-achọ nnukwu ụgbọ mmiri ọ na-eto eto na, dị ka ndị na-emepụta na ndị na-ere ahịa si kwuo, ọ bụ site na 2019 ka ihe niile gbagoro n'ụzọ nkịtị ka ọnụ ọgụgụ ndị ijeri ijeri butere ọrịa a na-abawanye. Ụwa anyị dị mwute, ebe ụfọdụ funahụrụ ha n'ọrụ, ndị ọzọ nwetara ọtụtụ nde...
Taa ahịa chọrọ ụgbọ mmiri buru ibu ma buru ibu ma dịka ihe ha na-ekwu si dị, nke a na-amalite. Onye na-arụ ụgbọ mmiri kacha mkpa bụ ụlọ ọrụ German Lürssen, nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri asatọ dị n'ebe ugwu nke mba Europe ahụ. Ndị na-emepụta ihe, ndị nwe na ndị mgbasa ozi na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na, n'ikpeazụ, ọchịchọ nke onye na-etinye ego ahụ mezuru. Taa, ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa bụ nke ị na-ahụ na foto a, Azzam. Ànyị maara ya?
Azzam, ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa
Taa ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa ọ dị otu narị mita na iri ise, ọ bụ ezie na n'afọ 2024, e nwere otu n'ụzọ nke na-eru mita 183. Ihe ọzọkwa bụ na ụlọ ọrụ na-arụ ụgbọ mmiri German nke anyị kwuburu okwu ya kwuru nke ahụ Ọ bụ naanị obere oge tupu ụgbọ mmiri ndị ahụ aghọọ nnukwu ụgbọ mmiri nke 200 mita n'ogologo. Ọ bụ omume.
Yabụ, Azzam bụ ụgbọ mmiri kacha ibu na mita 180 n'ogologo. Ọ bụ ụgbọ mmiri nzuzo kachasị ọnụ kemgbe 2013 na mbụ ọ dị mita 35 mkpụmkpụ. Lürssen wuru Azzam n'okpuru nduzi nke injinia Mubarak Saad al Ahbadi. Nwere ihe ruru nde dollar 600, naanị maka ihe owuwu, na n'ime usoro ahụ ọ na-eto eto ma na-eto eto ruo mgbe ọ ruru ogologo njedebe.
Edebere ụgbọ mmiri ahụ n'April 2013. Ndị ụlọ ọrụ German Lürssen Yatchs wuru, nke Nauta Yatchs mebere ya na ime ime site n'aka Christophe Leoni., e wuru na ngụkọta nke afọ atọ, oge ndekọ. Otu afọ tupu mgbe ahụ, na 2012, e bufere Azzam site na mmiri mmiri mbụ ya dị mita 170 gaa na mita 220 ka ukwuu iji rụchaa ọrụ ahụ. Ọ bụ na njedebe nke 2009 mgbe ígwè maka ụgbọ mmiri malitere ịkpụ, ya mere, na 2013, ọrụ ahụ mechara kwụsị.
ụgbọ mmiri a O nwere ohere ịnabata ndị ọbịa 36 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri kacha nta nke mmadụ 50 yana ndị ọrụ ụgbọ mmiri 80 kacha.. Ọ nwere ọnụ ụlọ ọzụzụ gọlfụ na ebe mgbatị ahụ, ma n'èzí bụ kpakpando. Nnukwu ọnụ ụlọ ya nwere ogologo mita iri abụọ na itoolu na oghere oghere nke mita 18 na-enweghị ogidi nkwado ọ bụla, ihe magburu onwe ya. Iji nye ọtụtụ ndị ọbịa ohere e nwere 50 suites na oche, nke ọma, enweghị nnukwu oghere oghere.
Ahịrị ndị dị n'èzí, profaịlụ, nwere mbinye aka nke Nauta Design, studio tọrọ ntọala site na Mario Pedol, na mgbe a na-ele ya anya, ọ na-egosi obere karịa mgbe elere ya anya. Uru nke ịkpachapụ anya.
Dị ka foto ndị na-ekesa n'ụgbọ mmiri, ọ nwere oche isii na imewe nwere teknụzụ iji lekọta gburugburu ebe obibi, na mbelata nke carbon monoxide na mkpọtụ anwuru. A na-ekwukwa na a na-eji ike ndị ọzọ sitere na engines mee ihe maka usoro nsị iji mee ka mmiri ghọọ mmiri ọṅụṅụ.
Ma Azzam abụghị ụgbọ mmiri dị nwayọ, dị ka ị nwere ike iche site na nha ya (nke ahụ gbasara ndị dike na-eji nwayọọ nwayọọ). Nke a abụghị ikpe, Azzam bụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa na nwere ike iru ọsọ nke ruru 31 knots ekele maka turbine mmanụ ụgbọala ya na igwe mmanụ dizel abụọ na-enye ike ụgbọ elu anọ. Azzam dị ihe dị ka puku tọn iri na anọ na mmanụ ụgbọala tank ya nwere ikike maka otu nde lita mmanụ ọkụ. A na-eme atụmatụ na ọnụ ahịa ya dị nde 605, ihe dị ka nde 100 karịa ụgbọ mmiri nke atọ kacha ukwuu n'ụwa, maka ojiji nkeonwe, Eclipse.
Ma onye nyere ikike ịrụ nnukwu ụgbọ mmiri a? N'ụzọ doro anya, onye Arab nwere nnukwu ego: na Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Onye isi ala United Arab Emirates. A na-eche na enwere ike ịgbazite ya maka ụgwọ ọrụ, mana ọ bụ naanị echiche. Gịnịkwa ka aha ahụ pụtara? Mkpebi.
Echere m na onye isi oche nke UEA enweghị mmasị na ego ole ọ na-efu iji chekwaa obere ụgbọ mmiri a, mana ọ dị oke ọnụ. Ọ dị ka 10% nke ọnụ ahịa ya bụ ihe ejiri na ya mmezi kwa afọ. Ya bụ, ụfọdụ 60 nde dollar kwa afọ.
Ọ bụrụ na enwere ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa a ga-enwerịrị ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri nke abụọ kacha n'ụwa… Nke ahụ ziri ezi, imechi taa akụkọ m na-eweta ụgbọ mmiri eklips nke ukwuu. onye nwe ya bu Roman Abramovih, onye ijeri Russia, onye ọchụnta ego, onye nwe ihe ndị ọzọ nke Chelsea FC nke Premier League. Ya ewu e kere afọ ise na-eri 409 nde dollar, otú ya ugbu a price, na nlele mere kemgbe ahụ, bụ 620 nde.
Ịkwado ụgbọ mmiri a na-efu nde 65 kwa afọ. Eclipse bụ ụgbọ mmiri mmanụ dizel eletriki, injin ya bụ Azipod na ime ime ya nwere akara mbinye aka nke ụlọ Bekee Terence Disdale Design, oche nke onye nwe ya dị mita 56 ogologo ma nwee ike ịnabata ndị ọbịa 36, ​​na ụlọ iri na asatọ, yana ndị ọrụ ụgbọ mmiri. 18 mmadụ. Ọ bụ ụgbọ mmiri dị oké ọnụ ahịa, ikekwe mara mma karịa Azzam.
Ọ na-agbakwụnye helipads atọ na ọdọ mmiri 16 mita iji zuru ike n'etiti oké osimiri na, mgbe ọ dịghị onye na-eji ya eme ihe, a na-ezobe ya ka ọ bụrụ ebe a na-agba egwú nke nwere ohere maka ezigbo ọkụ ọkụ. A ghaghị ikwu na mgbe Azzam pụtara, Eclipse ahụ kpuchiri n'ụzọ nkịtị, ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla ụgbọ mmiri Russia ka bụ nnukwu ụgbọ mmiri n'etiti nnukwu ụgbọ mmiri.
O doro anya, ndepụta ụgbọ mmiri dị oke ọnụ n'ụwa na-aga n'ihu. Anyị ekwuola na mmalite na site n'oge ruo n'oge, a na-achọsi ike maka ụgbọ mmiri ndị a n'ihi na ọnụ ọgụgụ ndị billionaires ndị na-amaghị ihe ha ga-eme na nnukwu ego na akaụntụ ha amụbaala.
Ụgbọ mmiri ndị na-esote na ndepụta bụ ndị Dilbar, nke onye ijeri Uzbek Alisher Asmanov dere, 156 mita, na Mahrousa, mita 145.72, ụgbọ mmiri onye isi ala Egypt na narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ Flying Fox, 136 mita, mgbe Beyonce na Jay Z gbaziri.
El Dubai, nke Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum nke Dubai, na 162 mita n'ogologo, nke North votu na 2021 nakwa site na Lürsse, na MKPU 183-mita ma ọ bụghị okomoko mana a ka na-arụ njem na-atụ anya na a ga-eme ya na 2024 na n'ikpeazụ, na Poland 910-mita Y120 nọ na nhazi nhazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa
Nri a na-ahụkarị nke Cordoba
Obodo ochie nke Spain